“Messi ayaa ah kan ugu fiican xilligan & guud ahaan taariikhda kubadda cagta adduunka” – Xiddig Liverpool ah – Gool FM
(Liverpool) 25 Sebt 2019. Lionel Messi ayaa habeenkii Isniinta aheyd ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee FIFA THE BEST, waxaana uu ku guddoomay magaalada Milan oo abaal-marinnada FIFA lagu bixiyay, isagoo ku garaacay xiddigaha Virgil van Dijk iyo Cristiano Ronaldo.
Daafaca kooxda kubadda cagta Liverpool ee Andrew Robertson ayaa qalbigiisa u furay shabakada caalamiga ah ee “ESPN” kaddib wareysi uu kaga hadlay waxyaabo badan oo isaga ku saabsan iyo mustaqbalkiisa kubadda cagta.
Robertson ayaa ka jawaabey su’aalo deg-deg ahaa ee lagu weydiiyay wareysigii uu siiyay shabakada ESPN, waxaana su’aalihii ugu muhiimsanaa ee la weydiiyay ka mid ahaa, kumaa ah ciyaaryahanka ugu fiican adduunka xilligan la joogo, iyo kan ugu fiican taariikhda kubadda cagta guud ahaan.
Waa kuma cayaaryahanka ugu fiican adduunka?:
“Waxaan u maleynayaa inuu yahay Lionel Messi”.
Keeba ah ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda kubada cagta?
“Sidoo kale Lionel Messi”.
Mar wax laga weydiiyay dareenkiisa ugu wanaagsanaa mustaqbalkiisa ciyaareed ee kubadda cagta, ayuu Robertson ku jawaabay:
“Xaqiiqdii ku guuleysigii tartanka Champions League-ga ee kooxda Liverpool waa dareenkii ugu fiicanaa”.
Robertson ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday sababta uu u doortay inuu u dhaqaaqo kooxda Liverpool wuxuuna yiri:
“Waa koox aad u fiican oo taariikh fiican ku dhex leh kubadda cagta”.
Shaxda rasmiga ah ee kulanka caawa horyaalka La Liga ee Kooxaha Real Madrid iyo Osasuna oo lagu dhawaaqay